नगरप्रमुख नेपालीव्दारा क्लबका लागि रु १ लाख आर्थिक सहयोग, विद्यालयलाई एक शिक्षकको व्यवस्था ! – ebaglung.com
२०७६ कार्तिक ३, आईतवार २०:३३	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
योगेन्द्र बिश्वकर्मा, बुर्तिबाङ, २०७६ कार्तिक ३ । ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देव कुमार नेपालीले तमानखोला गाउँपालिका–१ स्थित जनकल्याण स्पोर्ट क्लवलाई रु. १ लाख १ हजार आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् । सोही अवसरमा नगरप्रमुन नेपालीले पहिरा स्थित भुमे प्राथमिक विद्यालयका लागि १ जना शिक्षक व्यक्तिगत रुपमा आफुले तलब भत्ता व्यवस्था गरी राखिदिने समेत घोषणा गरेका छन् ।
नगरप्रमुख नेपालीले जनकल्याण स्पोर्ट क्लवले आयोजना गरेको तिहार विशेष कार्यक्रमको उद्घाटनका अवसरमा सहयोेगको घोषणा गरेका हुन् ।
नियम अनुसार शिक्षक छनौट गरी आवश्यक कागजात सहित आफुसंग सम्पर्क राख्नका लागि विद्यालयलाई अनुरोध गर्दै शिक्षक छनौटका क्रममा योग्यता पुगेका गरिव, दलित तथा विपन्न परिवारका नागरिक छनौट गर्न समेत विद्यालयलाई आग्रह गरे ।
प्रमुख अतिथीको रुपमा बोल्दै उनले क्लवको खेल मैदान सहितको आफ्नै भवन निर्माणमा सहयोग पुगोस भन्ने उद्धेश्यले आर्थिक सहयोग गरेको नगर प्रमुख नेपालीले बताए । नगर प्रमुख नेपालीले स्थानिय क्लवहरुले मेला लगाउने मात्र नभएर अन्य सामाजिक क्रियाकलापमा समेत सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताए । जनताको हितमा काम गर्ने क्लव मात्रै होईन, जुनसुकै संघ÷संस्थालाई आफ्नो पुर्ण रुपमा सहयोग रहने उनको भनाई थियो ।
सोही अवसरमा उनले तमानखोला गाउँपालिका वडा नं. १ का ५ जना खरको छानो भएका गरिव तथा विपन्न परिवारका लागि रंगिन जस्ता पाता उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरे । सम्वन्धीत वडा कार्यालय मार्फत गरिएको सिफारिसका आधारमा आफुले जस्ता पाता उपलव्ध गराउने भन्दै छनौटको जिम्मा भने स्थानिय जनप्रतिनिधी र क्लवलाई दिए ।
त्यसैगरी स्थानिय सिर्जनशिल आमा समुह, पहिरा र हातेमालो आमा समुह, सेन्नामाका लागि पनि रु. ६१ हजार आर्थिक सहयोग समेत गरेका छन् । कार्यक्रमकै अवसरमा स्थानिय १२ जना बृद्ध, बृद्धा, पञ्चेबाजा, सोरठी गीत तथा नृत्य समुहलाई नगद रकम सहित सम्मान प्रदान गरेका थिए ।
मेला अध्यक्ष टिकाराम जक्तपुरीको अध्यक्षता रहेको उक्त कार्यक्रममा क्लव सदस्य तुलेन्द्र जक्तपुरीको स्वागत मन्तव्य रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन संचारकर्मी योगेन्द्र विश्वकर्माले गरेका थिए ।